Isku-darka unugyada Qabashada Hawada Warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Hawada
Naqshadeynta taxanaha HJK-E ee Isku-dhafan Hawo Qabashada Hawada, waxay u ekaantaa GB / T 14294-2008 Heerarka Qaranka si adag, waxayna sii wadaa qoto-dheerka R&D iyo cusbooneysiinta waqtiyada, iyadoo la aasaasay faa'iidada ugu horreysa ee Teknolojiyada Soo-kabashada Heat. Jiilka cusub ee Holtop ee "U" Qaybta Qabashada Hawada ee Taxanaha, ayaa aad uga fog heerarka caadiga ee sifooyinka waxqabadka badan.
Naqshadda Qaybta Xasaasiga ah Naqshadda Xaaladda AHU: Guud ahaan 61 nooc oo ah Qaab-dhismeedka Qaybta Heerka ee Xaaladda AHU, ayaa u dhigma baahida mugga hawo badan. Dhanka kale, si loo waafajiyo saamiga mugga hawada kala duwan ee u dhexeeya hawo bixinta & hawada qiiqa dalabyada dalabyada kala duwan, Holtop wuxuu sameeyaa naqshad Qaybta Qaabdhismeedka oo dheeri ah si waafaqsan, si loo damaanad qaado waxqabadka AHU, isla markaana u ka dhigto xajmiga AHU isla markaa, si loo badbaadiyo qiimaha booska qolka mashiinka.
Module Heer Sare ah Naqshadeynta: Qaado qaabeynta qaabka Module, 1M = 100mm. Naqshadeynta Module waxay ka dhigeysaa AHU mid is haysta sida ugu macquulsan, dhanka kale waxay ka dhigeysaa naqshadeynta iyo soo saaridda kuwo ku habboon & jaango'an.
Hagaha Tiknoolajiyadda Muhiimka ah ee Soo-kabashada Kuleylka: HJK-E Taxanaha AHU, ayaa ku qalabayn kara habab soo kabasho oo kala duwan. Kala beddelka kuleylka kuleylka ah ayaa ah mid aad u kooban oo codsiyo hawleed ballaaran leh. Badeecada kuleylka kuleyliyaha waa kharash yar oo leh saamiga soo kabashada ee habboon. Isweydaarsiga kuleylka kuleylka kuleylka ah waa sahlan yahay in la ilaaliyo oo si ballaaran loo dalbado; Iskuduwaha kuleylka wareejiyaha Glycol wuxuu leeyahay eber iskabaddarin wasakh & heer nadiif ah. Hababka soo kabashada kuleylka kala duwan ayaa qancin kara dalabaadka keydinta tamarta kala duwan.
Qaabdhismeedka Aluminium ee Aluminium & Nylon Cold Bridge: Qaado xoog sare oo iskudhaf ah oo iskudhafan aluminium ah, xoog farsamo illaa heerka D2. Qaboojiyaha 'Cold Bridge' ayaa ka jaray naqshaddii oo la xoojiyay aaladda PA66GF oo la xoojiyay, qodobka buundada qabow illaa fasalka TB2. Dhanka kale, qaab dhismeedka shaabadaynta cusub ee saamiga baxsiga hawada <1%, wuxuu gaaraa isdaahirinta heerarka qaboojinta hawada.
DoubleSkin Panels: Qaab dhismeedka guddi “Sandwich” ah, oo leh 25mm & 50mm laba qeexitaan. Maqaarka dibedda waa Xaashida Midabada Midabkeedu yahay midab cad oo u dhigma qaabka aluminium. Maqaarka gudaha waa xaashi bir ah oo galvanized ah, xaashi bir bir ah oo aan lahayn ayaa ikhtiyaar u ah in lagu qanciyo dalabka dalabka gaarka ah. Qalabka kuleylka kuleylka ee PU wuxuu bixiyaa hantida ugu wanaagsan ee kuleylka kuleylka leh. Alwaaxda iyo qaabdhismeedyadu si adag ayaa loo xiray, dusha sare waa mid nadiif ah oo nadiif ah.
Qalabka jilicsan ee la heli karo: VP & Siraaj Siraha Adeegga Albaabka waa ikhtiyaari, beddelka cadaadiska ama mitirka cadaadiska kala duwan ee miirayaasha ayaa ikhtiyaari ah, sidoo kale. Hawada hawada ama marinka hawada ee ku qalabeysan hawo xiran waa ikhtiyaari. Qalabyo badan ayaa la heli karaa.
Waxqabadka sare qaboojinta / kululeeyaha biyaha: Qalabka biyaha ee Holtop ayaa si madaxbanaan loo baaray oo la soo saaray, kuwaas oo ka samaysan tuubooyin naxaas ah oo tayo sare leh baalal aluminium, iyada oo loo marayo tiknoolajiyad ballaadhan oo ballaadhinaysa isugeyn dhammaystiran, oo leh waxqabadka kuleylka wareejinta heer sare ah. Gariiradda ka dib, PVC ama biraha birta ka saaraya ee birta ah ayaa la rakibi karaa. Iyo saxaarad kondensate ah ayaa lagu rakibi karaa si loo hubiyo in si qumman looga saaro dheecaanka.
Isku-darka miirayaasha badan: Qeybta taxanaha HJK-E waxay siisaa isku-dar ah miirayaal iyo miirayaal qeexitaano kala duwan ah si loo daboolo baahiyaha isticmaalaha hawo nadiif ah oo kala duwan. Miirayaasha cufan ayaa buuxin kara shuruudaha guud ee nidaamka hawo qaadista, miirayaasha dhexdhexaadka ah ayaa la kulmi kara shuruudaha nadiifinta guud ee hawo-qaadashada. Miirayaasha PM2.5 ee gaarka ahi waa ikhtiyaari, hawada cagaaran hadda kama sii fogaan karto. Intaa waxaa dheer, miirayaal qaas ah oo loogu talagalay nadiifinta elektarooniga ah iyo codsiyada kale ayaa sidoo kale la heli karaa.
Taageero tayo sare leh ： Ikhtiyaar tayo sare leh oo ikhtiyaar ikhtiyaari ah, oo ay ku jiraan wadista tooska ah ee mashiinka laba-nuugista, taageere laba jibaaran horay / gadaal gadaal, taageere fiilo, taageere EC iyo wixii la mid ah. Meel ay ka baxaan marawaxadaha iyo flange waa jilicsan yihiin. Qaybaha naxdinta-nuugaya ee u dhexeeya marawaxadda iyo salka ayaa go'doomin kara gariirka si wax ku ool ah.
Dayactir badan oo dheeri ah unit Qaybta waxay isticmaashaa qaybo badan oo istaandar ah, oo si sahal ah u noqon kara Qeybta waxaa loogu talagalay albaabbo laga soo galo oo lagama maarmaan ah waxaana lagu qalabeyn karaa daaqadaha wax lagu fiirsado iyo nalalka cadeynaya huurka si loo fududeeyo dayactirka. Guddi cutub ayaa laga saari karaa banaanka, way fududahay in la kala furfuro. Guddiyada waxaa lagu sharaxay daboollo qurxin leh, godadka ciddiyaha saameyn kuma yeelan doonaan muuqaalka cutubka.
Hore: Unugyada Qabashada Hawo Soo Celinta Heat